I-Gunn Rd Luxury Studio - i-e-bike ne-wifi yamahhala
Albert Town, Otago, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Tish
I-Self-Contained Luxury 1 Bedroom Studio Cottage enombhede ongusayizi wendlovukazi. Sicela UQAPHELE, ngenxa yemithetho yoMkhandlu Ikhishi ALInawo usinki. Kunezindawo zokupheka ezinebhentshi top hot plate, i-convention microwave, ujeke, isiqandisi, izinto zokupheka nezinto zokusika. Ikotishi line-en suite kanye ne-log burner. I-wifi yamahhala, i-apple TV, i-BBQ, indawo yokupaka kanye nokungena kwangasese. Ibhayisikili le-E esizeni liqashwa mahhala amahora angu-2 ngosuku, u-$15 ngehora ngemva kwalokho. Eduze kwamathrekhi wamabhayisikili, emfuleni nethaveni yasendaweni, 5km ukusuka eWanaka
Iqedwe ngo-2017, isitudiyo sokulala esi-1 esizimele esine-en suite sesiqediwe ngemininingwane ecophelelayo, sinikeza izivakashi umuzwa okhethekile. Ngeshwa, ngenxa yemithetho yoMkhandlu, asikwazi ukufaka usinki wekhishi esitudiyo.
Kuthokomele ngokwedlulele ebusika ngesishishi sakho sogodo. Phezulu komatilasi kalayini kuqinisekisa ukunethezeka okwengeziwe kokulala okuhle ebusuku. Kukhona ne-BBQ etholakalayo yezivakashi kanye nebhayisikili ye-e (mahhala emahoreni angu-2 okuqala osuku ngalunye, u-$15 ngehora ngemva kwalokho), kanye namabhayisikili angu-2 mahhala, i-wifi, i-apula TV kanye nezindawo zokupaka izimoto ukuze uthole ukuvikeleka okwengeziwe. Eduze komfula namathrekhi wamabhayisikili, 5km ukusuka e-Wanaka.
4.86(64 okushiwo abanye)
Ukuhamba imizuzu embalwa ukuya emfuleni lezi zindlu ezincane ziyiphupho lomdobi! Amathrekhi amahle aholela ku-Wanaka, Hawea kanye ne-Luggate nawo ahamba imizuzu embalwa ukusuka esangweni elingaphambili. Uma uthanda i-Mountain Biking ngakho-ke ngeke ube ngcono kakhulu, ngokukhethwa kwamathrekhi ahlukene angu-5, okuhlanganisa ne-Hikuwai loop emelene nje nendawo yokubhuka. Uma uthanda umsebenzi omuhle, i-Mt Iron iseduze, futhi izinkundla zokushushuluza e-Cardrona ne-Treble Cone ziku-40 min uma uhamba ngemoto. I-Albert Town ihlinzeka ngesitolo sendawo, i-gourmet fish kanye ne-chip takeaway, indawo yokudlela ye-Fish, i-Prince Albert pub esanda kulungiswa kanye ne-Double Black cafe edume kabi. I-Wanaka iwuhambo lwemizuzu eyisikhombisa (cishe amakhilomitha amahlanu), isondele ngokwanele ukuze uyijabulele futhi kude ngokwanele ukuba ubaleke!
Indlu enkulu ihlala abasingathi bakho u-Tish no-Dwayne nendodana yabo u-Ajay. Siyatholakala ukuze sisize nganoma yimiphi imibuzo, nokho sithanda kakhulu ukushiya izivakashi zethu zodwa ukuze sijabulele ukuthula kweWanaka.
UTish Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Albert Town namaphethelo